Kulankii Aqalka Sare oo baaqday iyo Senator eedeyn u jeediyay Madaxweyne Farmaajo | SMC
Home WARARKA MAANTA Kulankii Aqalka Sare oo baaqday iyo Senator eedeyn u jeediyay Madaxweyne Farmaajo
Kulankii Aqalka Sare oo baaqday iyo Senator eedeyn u jeediyay Madaxweyne Farmaajo
Kulankii Xildhibanada Aqalka Sare ayaa baaqday ka dib markii maanta aysan soo xaadirin kulanka qaar ka mid ah Senetarada Aqalka Sare ee kasoo horjeedda Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ku xigeenkiisa koowaad.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Aqalka Sare oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in Madaxtooyadda ay khilaaf ka dhex waddo Aqalka Sare,islamarkaana maanta in kulanka uu baaqdo ay ka dambeeyeen.
Xildhibaanada ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu ka dambeeyay Khilaafka ka dhex taagan Xildhibaanada Aqalka Sare.
Waxa ay sidoo kale sheegeen in Sharcigii doorashooyinka ee ay gudbiyeen in xubno ka mid ah Madaxtooyadda Soomaaliya ay wax ka badal ay ku sameeyeen , islamarkaana aysan aqbali doonin.
Ugu dambeyntii waxa ay tilaamaameen in Madaxeyne Farrmaajo ay ugu baaqayaan in uu faraha kala baxo howlaha Aqalka Sare.
Previous articleGuddiga Doorashooyinka oo ku dhawaaqday in aysan Doorashadu waqtigeeda ku dhici karin
Next articleKulankii Aqalka Sare oo baaqday iyo Senator eedeyn u jeediyay Madaxweyne Farmaajo